लैङ्गीक हिंसा बिरुद्धको अभियानमा दुप्चेश्वरको प्रतिवद्धता (कार्यक्रमको तस्बिर सहित) -
लैङ्गीक हिंसा बिरुद्धको अभियानमा दुप्चेश्वरको प्रतिवद्धता (कार्यक्रमको तस्बिर सहित)
प्रकाशित मिति :२०७७ मंसिर १९, शुक्रबार
मंसिर १९, नुवाकोट ।
जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले लैङ्गीक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । अभियानको १० औँ दिन अर्थात आज गाउँपालिका स्थित दुप्चेश्वर मन्दिर परिसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गाउँपालिका,अथिति एवं सहभागीहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
‘लैङ्गीक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको आयोजनामा आयोजित उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता गा.पा. अध्यक्ष योविन्द्रसिँह तामाङले गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख अप्सरा थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक मदन ढुंगाना, गा.पा. उपाध्यक्ष अन्जु आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद अधिकारी प्रहरी निरिक्षक कमला नराल लगायत विभिन्न विद्यालयका प्रतिनीधिहरुको अथितिहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका वडा नं.३, ६ र ७ का अध्यक्षहरु ध्रुवकर केसी,किशोर आचार्य र भेषबहादुर सिटौला, गा.पा.कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न संघसँस्थाका प्रतिनीधि, महिला सञ्जाल, महिला समूह तथा किशोरी समूहका सदस्यहरुको उपस्थिती थियो ।
अभियानमा प्रतिवद्धता जनाउँदै आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम अलि फरक प्रकृतिको थियो । सामान्यतया कार्यक्रमहरु बजार वा कुनै स्टेजमा आयोजना हुने गरेकोमा दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले यस पटक दुप्चेश्वर मन्दिर परिसरमा रहेको खुल्ला खेतमा आयोजना गरेको थियो । तडकभडक बिनानै अति सामान्य ढंगबाट सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमको विषयवस्तु भने अहम् थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख अप्सरा थापाले १६ दिने अभियानले मात्र हिंसा अन्त्य सम्भाव नहुने हुँदा ३६५ दिननै अभियान चलाउनु पर्ने बताइन् । सबैभन्दा पहिला मानिसको चेतनास्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले ५१ प्रतिशत हिस्सा महिलाको भएको मुलुकमा अझै पनि महिलाहरु हिंसाको जोखिममा रहेको बताए । महिलाहरुको सशत्तिकरण बिना लैङ्गीक हिंसा अन्त्य गर्न कठिन हुने उनको भनाई थियो । प्रजिअ ढकालले संस्थागत सुत्केरी गराउने अभियान सञ्चालन गरेकोमा दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई धन्यवाद समेत दिए ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै गा.पा. अध्यक्ष योविन्द्रसिँह तामाङले जबसम्म मानिसको चेतनामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म कुनै न कुनै रुपमा हिंसाले प्रस्रय पाइरहने बताए । लैङ्गीक हिंसाको अन्त्यका लागि दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले छुट्टै बजेटको समेत व्यवस्था गरिसकेको उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष तामाङको भनाईमा थप्दै उपाध्यक्ष अन्जु आचार्यले हिंसामा महिला मात्र नभइ पुरुष समेत पर्ने गरेको र यो आजको मात्र विषय नभएको बताइन् । लैङ्गीक हिँसाको अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रा कतिपय संकुचित परम्परा तोड्नु पर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा वडा नं ३ का अध्यक्ष ध्रुवकर केसीले आगामी दिनमा हिंसा न्युनिकरणका लागि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिरहनु नपर्ने अवस्था सृजना गर्न सवैमा आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रमको समापन पश्चात अथितिहरुले दुप्चेश्वर मन्दिर दर्शन गरी फर्केका थिए ।